SD-P104 Bread Maker Machine - Panasonic
အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့် ပေါင်မုန့်ဖုတ်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်
• အပူချိန် အာရုံခံစနစ်
• အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်သော Dispenser များ
• 13-နာရီအထိ အချိန်သတ်မှတ်ပေးနိုင်သော digital timer
• menu 13 ခု
ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော အဆင့်5ဆင့်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက်
1. ပေါင်မုန့်လင်ပန်းကို ဆွဲထုတ်ယူပြီးနောက် မုန့်နယ်ပေးသည့် ဘလိတ်ပြားကို တပ်ဆင်ပါ။
2. ပေါင်မုန့်လင်ပန်းထဲသို့ တစေး အခြောက်မှုန့်မှတပါး ဂျုံမှုန့်နှင့် အခြားအမယ်များကို ထည့်ပါ။
3. အသင့်သုံး တစေး အခြောက်မှုန့်၊ သစ်သီးခြောက်များနှင့် မြေပဲများကိုdispenser ထဲတွင် ထည့်ပါ။
4. menu ကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် စတင်ရန် ကိုနှိပ်ပါ။
5. အချက်ပေးသံကြားပြီးနောက် ပေါင်မုန့်ကို ထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ။
Panasonic ၏ ပေါင်မုန့်ဖုတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကို လိုက်ပြီး ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ချိန်ညှိပေးသည်။ အပူချိန် အခြေအနေများ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ ပရိုဂရမ်တိုင်း၏ စုစုပေါင်း ပေါင်မုန့်ဖုတ်ချိန်သည် တူညီသည်။
တစေးထုတ်ပေးစက်က ကျွမ်းကျင် ပေါင်မုန့်ဖုတ်သမားတစ်ဦးကဲ့သို့ပင် တစေးများကို အချိန်ကိုက် အလိုအလျောက် ထည့်ပေးသည်။
စပျစ်ခြောက်မြေပဲ Dispenser က နုတ်နုတ်စင်းထားသော သစ်သီးခြောက်များ၊ စပျက်ခြောက်များ၊ မြေပဲများနှင့် ကောက်နှံစေ့များ စသည်တို့ကို ထည့်ပေးသည်။ ပေါင်မုန့်ပေါ်တွင် ဖြည့်စွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ညီတူညီမျှ ရှိနေအောင် သေချာ ပြုလုပ်ပေးသည်။
13-နာရီအထိ အချိန်သတ်မှတ်ပေးနိုင်သော Digital Timer
၎င်းတွင် ကြိုသတ်မှတ်နိုင်သည့် digital timer ပါရှိသည့်အတွက် စက်ကို 13 နာရီအထိ ဖွင့်ထားရန် အလိုအလျောက် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် နံနက်တိုင်းတွင် လတ်ဆတ်စွာ ဖုတ်ထားသော ပေါင်မုန့် ပွပွ မွမွလေးကို သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။
ပေါင်မုန့်အကာသားအတွက် ထိန်းပေးသည့်အပြားပါရှိသောကြောင့် အကာသားအရောင်ကို ဖျော့နှင့် အလယ်အလတ်အဖြစ် သတ်မှတ် ရွေးချယ်နိုင်သည်။
10-မိနစ် ပါဝါ ပြတ်တောက်မှုကို ကာကွယ်ပေးမှု
ပေါင်မုန့်ဖုတ်စဉ် ပါဝါ ပြတ်တောက်သွားပါက စက်သည် 10 မိနစ်ကြာသည်အထိ မမ်မိုရီကို ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်ပြီး ပါဝါပြန်ရသည့်အခါ ဆက်လက် ဖုတ်ပေးပါမည်။
Menu 13 ခု